Shirweynihii Qaran ee Qabridahare oo Soo Gaboobay iyo Xubno ONLF, oo Addis Ababa ku Soo Laabtay – Rasaasa News
Oct 4, 2010 ethiopia, Ogaden, ONLF, oo Soo Gaadhay Addis Ababa, peace, Shirweynihii Qaran ee Qabridahare oo Soo Gaboobay iyo Qaar ka Mid ah ONLF
Qabridahare, [Oct 03, 2010] – Warar naga soo gaadhay magaalada Qabridahare ayaa waxay sheegayaan in galabta makhribnimadii uu soo gabo gaboobay shirweynihii Qaran ee Qabridahare oo socday mudo laba maalmood ah.
Shirweynaha Qaran ee Qabridahare oo duco uu ku bilaabay Muftiga magaalada Qabridahare Sheekh Nuure Sheekh Maxamed, ayaa maantana waxaa uu ku xidhay shirka duco.
Waxaa kale oo isna gababadii shirkii galabta ka hadlay Suldaanka gabalka Qoraxeey oo hogaaminayey waftiga ka tagay dalka Ingriiska. Suldaanka ayaa ugu baaqay guud ahaan dadweynaha degaanka ee shirka ka qayb galay in ay ka shaqeeyaan nabada iyo wanaaga dadka iyo degaanka, ayna qabtaan cidii xumaan ka dhex wada degaanka.
Shirka oo la filayey in uu socon doono 10 maalmood ayey hawlihiisu ku dhamaadeen laba maalmood, sababtuna waxaa weeye iyada oo uusan jirin wax badan oo loo baahan yahay in la iska dhaadhiciyo. Dadweynaha degaankuna ay hore u wacyi qabeen maadaama ay hore u sii joogeen mudo xubno golaha dhexe ONLF.
Shacabka degaanka ayaa aad uga dharagsan isbadalka ku yimid ururka ONLF, oo isagu go,aansaday in uu nabad u qaado dadweynaha Somalida Ogadeeniya, mudana dagaal ku jiray.
Waxaa magaalada Qabridahare wali ku sii sugnaandoona wufuuda ONLF inteedii badnayd iyo Qurbo-jooba, kuwaas oo wali la hadlaya waxgaradka 52ka degmo ee uu degaanka Somalidu ka kooban yahay.
Wufuuda ONLF, ee caawa soo gaadhay Addis Ababa ayaa ah gudi farsamo, oo la doonayo in ay u gudbiyaan dawlada federalka ah iyana ay ka helaan nuqulada la doonayo in la saxiixo dhawaan.
Wufuuda ONLF, ayaa la filayaa in wixii ka dambeeya todobaadka fooda inagu soo haya ay isugu soo ururaan magaalada Jijiga ee xarunta ismaamulka Somalida, si ay ugu diyaar garoobaan xaflada saxiixa ee Addis Ababa ka dhici doonta.
Go,aamadii shirweynaha gadaal baan idiinka soo gudbindoonaa.
Shirweynihii Qaran ee Qoraxeey oo Maanta ka Bilowday Degmada Qabridahare